२७ बाणिज्य बैंकले कमाए ४५ अर्ब नाफा, कुन बैंकको कति ? - khull Post२७ बाणिज्य बैंकले कमाए ४५ अर्ब नाफा, कुन बैंकको कति ? - khull Post
पुरुषोत्तम ढकाल ३१ बैशाख २०७७, बुधबार २१:५१ 139 Views
काठमाडौँ: नेपालमा सञ्चालित २७ बाणिज्य बैंकले चालु आथिर्क बर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ४५ अर्ब ६९ करोड खुद नाफा कमाएका छन् । बैंकहरुले हालै सार्वजनिक गरेको चैतसम्मको वित्तिय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
बैंकहरुको यो नाफा गत आवको सो अवधीको भन्दा २.३६ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सो अवधीमा यी बैंकले रू. ४४ अर्ब ६४ करोड नाफा कमाएका थिए ।
गत आवको सो अवधीका बैंकहरुको नाफा २१ प्रतिशतले बढेको थियो । तर यसपटक भने लकडाउनका कारण बैंक कारोबार कमी आएपछि बैंकको नाफा बृद्धिदर खुम्चिएको हो ।
सरकारले कोरोना भाइरसबाट बच्न गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन लगाएको छ । त्यसपछि बैंक कारोबार ठप्प जस्तै भएको छ । सरकारले नै बैंक ऋणको किस्ता र व्याज भुक्तानीको म्याद थपिदिएको छ । त्यसपछि व्याज भुक्तानी नहुदाँ बैंकहरुको व्याज आम्दानी हुन सकेको छैन ।
त्यसैले बैकको नाफा बृद्धिदर खुम्चिएको बताइएको छ । एलसी लगायतका अन्य आम्दानीको स्रोत पनि अन्योलमा परेपछि बैंकको नाफा नबढेको बताइन्छ ।
समिक्षा अवधीमा १२ बैंकको नाफा घटेको छ भने ६ बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । तथ्यांकअनुसार नविल बैंकले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएको छ । नविल बैंकले ३ अर्ब १५ करोड ८६ लाख खुद नाफा कमाएको छ ।
यस्तै, दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि ३ अर्ब १५ करोड ३९ लाख खुद नाफा कमाएको देखिन्छ । यस्तै, गत आवमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक भने यो पटक तेस्रो स्थानमा रहेको छ । उक्त बैंकले रु. ३ अर्ब ३ करोड खुद नाफा कमाएको छ ।
समिक्षा अवधीमा लक्ष्मी बैंकको वितरणयोग्य नाफा रू. ४१ करोड १ लाखले घाटामा छ । यस्तै, नेपाल बैंक रु. ६ करोड १९ लाखले घाटामा रहेको छ ।
यस्तै, सिदार्थ बैंकको रु. १५ करोड ३२ लाख, , सनराइज बैंकको रु. १७ करोड ५५ लाखले वितरणयोग्य नाफा घाटामा छ । साथै, बैंक अफ काठमाडौंको रु. ९ करोड ८ लाख र सिभिल बैंकको १९ करोड ७ लाखले वितरणयोग्य नाफा घाटामा रहेको वित्तय विवरणमा उल्लेख छ ।
यस बाहेक अन्य बैंकको वितरण योग्य नाफा भने सकरात्मक नै रहेको छ ।
कुन बैंकको कति नाफा, हेर्नहोस्